Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Hector Bellerin Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny kintan'ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; "The Little Magician". Ny Hector Bellerin Childhood Story ankoatra ny zava-misy momba ny tantaram-piainan'ny tantara dia mitondra anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fifandraisany amin'ny fiainana, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony haingana, saingy vitsy no mihevitra ny biography of Hector Bellerin tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Héctor Bellerín Moruno dia teraka tamin'ny andro 19 tamin'ny 1995 tamin'ny volana marsa tany Barcelona, ​​Espagne. Izy dia Fisafidianana voamarina hatramin'ny fahaterahana. Teraka tamin'i Andry sy Maty Moruno i Hector, Espaniola sy olom-pirenena avy any Katalonia.
Nanomboka ny andron'ny baolina kitra i Héctor tao amin'ny "Youth Youth System" hatramin'ny taona 6. Nandany taona 8 izy nianatra momba ny filozofia baolina kitra any Barcelona amin'ny fanafihana fa tsy ny elatra havanana.
Na dia fony mbola zaza aza i Héctor dia naneho ny halavam-pitenenany ary nanafika ny lalao nandritra ny fotoanany tany Barcelone. Imbetsaka izy no nifidy azy 'Olona amin'ny fifaninanana' amin'ny fifaninanana. Ny lazany dia nitsangana tamin'ny 2008 Ny fifaninanana iraisam-pirenena Canillas any Madrid izay nomena ny lehilahy ny loka fifanintsanana izay natolotr'i Zinedine Zidane.
Ny mpankafy FC Barcelona rehetra dia tia an'i Bellerín. Nahafaly azy ireo ny nijery azy tamin'ny fampiasany ny paik'izy ireo amin'ny fananganana mpiaro ny mpanohitra ary koa ny mandeha haingana amin'ny toerana fiarovana. Ny fifalian'izy ireo dia nosamborin'ny lehilahy iray, Arsene Wenger.
tahaka Cesc Fabregas, I Bellerin tamin'ny vanim-potoana 16 dia nafahan'i Arsene Wenger tany Avaratr'i Londres. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ny fiainan'i Hector Bellerin teo an-tampony sy teo am-pamoloana dia nahatonga fivoarana mahaliana hatramin'ny nahatongavany tany Angletera. Niaraka tamin'ny modely tsara tarehy Shree Patel izy.
Hector sy Shree Patel
Ny hatsaran-tarehy manopy volo dia miaina any Londona ary manana karazana Indiana. Izy no modely ho an'ireo tia an'i Calvin Klein sy ny marika fanatanjahantena Ellesse ary manana mpanaraka mihoatra ny 20k ao amin'ny kaontiny Instagram izay antsoina hoe 'iamshree'.
Shree no hany olona nanampy an'i Hector hiady irery rehefa tonga tany Londres ho zazalahy 16 taona. Raha vao nanomboka ny fifandraisana iray volana taorian'ny nahatongavany, dia tsy nahatsiaro tena tanteraka mihitsy i Hector tao amin'ity tanànan'i Londres ity.
Samy tia ny havan-tian-dry zareo ny roa tonta. Ny sary etsy ambany dia azo zaraina taorian'ny fampifandraisana.
Hector sy Shree, tia ny rehetra.
Ny fandaniana fotoana tsara eny amoron-dranomasina dia tena iray, ny tena mitovy endrika ny mpankafy roa. Tsy ho gaga ireo mpankafy raha toa ka manambara ny fanambadian'izy ireo amin'ny fotoana fohy.
Hector sy ny sipany, mandany fotoana tsara eny amoron-dranomasina
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -A CoD Lover
Amin'ny maha-zazalahy 16-taona iray nizotra ho any amin'ny firenena vahiny, nahita ny fiainana any Angletera i Bellerín tamin'ny fotoana sarotra. Nila fanampiana izy mba hiatrehana ny sakana amin'ny tenim-pirenena sy ny fampiofanana matihanina ao amin'ny Akademia Arsenal.
Tena manjombona ny androm-piainany ary tsy misy zavatra maro azon'izy ireo atao ao anatin'ny fotoana tokana hanalany azy ireo amin'ny lazany. Ankoatra ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny sipany, i Hector dia mandany ny fotoana rehetra hilazany ny Call of Duty amin'ny PlayStation 4.
Hector- A mpihina mafy ny CoD
Raha ny tsara indrindra, raha tsy manongotra ny sisintaniny havanana any Emirà Arabo izy, dia manaparitaka ny totoziny amin'ny Console PlayStation. Ity ambany ity ny resadresaka nataony tamin'ny Call of Duty Event.
Ireo ekipa mpiara-dia amin'i U18 izay nampahafantariny azy voalohany amin'ny Call of Duty, ary dimy taona aorian'ilay tsipika nokasihiny tamin'ilay lalao mpilalao horonantsary malaza voalohany. Bellerín dia nilaza fa tao anatin'ny roa taona voalohany taorian'ny nilazany ny lalao dia tokony hilalao azy mandritra ny andro maromaro aorian'ny fampiofanana izy.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny ny masoandro, Hoy i Bellerín. "Fihetseham-po ho ahy izany. Tsy mahazo fotoana betsaka hilalao aho, ka rehefa miaraka amin'ny vadiko aho, dia matetika aho no milalao CoD. "
Ankoatra ny filalao Cod sy ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny sipany, dia tia ny hijery horonan-tsarimihetsika TV miaraka amin'ny alikany i Hector izay mazàna mihaino ny filma rehetra.
Hector sy ny alikany izay maneho ny fijerin'ny sarimihetsika iray
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mora haingana noho i Theo Walcott
Hatramin'ny nahatongavany tao amin'ny club iray tao amin'ny 2006, Theo Walcott no mpilalao haingana indrindra tany Avaratr'i Londres. Tamin'ny fiantombohan'ny vanim-potoanan'ny 2014-15, dia tapaka izy Theo Walcottny Arsenal 40-meter dia raketin'ny 1 / 100th faharoa.
Theo WalcottNy rakitsoratry ny 40 metatra dia 4.78 segondra saingy ny Espaniôla dia nanohana izany tamin'ny fotoana 4.77 niverina tao amin'ny 2015. Na izany aza, ny tatitra ankehitriny dia manoro hevitra fa i Bellerín dia nanarona an'io fotoana io hidina amin'ny 4.42 mahagaga.
Raha ny marina, ny mpanafika ny Arsenal dia haingana indrindra ka mety ho afaka hivoaka "Telo-Triple" medaly volamena i Usain Bolt, izay nanara-maso ny 4.64 segondra mba handrakofana ny metatra 40 voalohany rehefa nametraka ny rakitsoratra manerantany ho an'ny Sprint 100.
Miaraka amin'ny fanamarihan'ny aterineto, na i Bellerín sy i Bolt aza dia naneso mihitsy aza tamin'ny alalan'ny fanamby tamin'ny alalan'ny Twitter. Tsy isalasalana, Hector dia heverina ho iray amin'ireo mpilalao baolina kitra indrindra eran-tany.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fitsarana diso
Nandritra ny ririnin'ny 2013, Arsène Wenger dia nandefa ny vidin'ny 18-taona efa be mpividy indrindra ho an'ny faritra Kiorda Watford. Tamin'izany fotoana izany, ny Espaniard ihany no nanao ny fampisehoana 8 ary maro ireo mpanohana ny Arsenal no tsy nahatakatra ny antony. Raha mazava tsara fa tsy hahazo ny minitra nila azy ilay tanora dia tsaroan'i Wenger izy roa volana monja.
Nodinihan'i Hector indray i Hector tamin'ny alalan'ny Watford
Taona vitsy taty aoriana, ny kapiteny Watford Troy Deeney dia nanome antsika fanazavana mikasika ny antony nandraisan'ny graduate La Masia vitsivitsy tao amin'ny Vicarage Road. Nasehony fa ny mpitantana tamin'izany fotoana izany, Giuseppe Sannino, dia nahita ny Espaniôra ho mora lanja amin'ny tanjely ary tsy misy fiarovan-tena mifanaraka amin'ny lalany.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny Fiovam-po
Mety ho nandao azy io ny fihodiny sy ny fanaraha-maso baolina mamy. Saingy talohan'ny fotoanany tany Londres, dia mpihazakazaka tany Barcelona i Hector Bellerín. Raha vao tonga tany avaratr'i Londres izy dia niova tanteraka.
Izy izay dia Wenger ny tenany izay nantsoina farany mba hamadika azy amin'ny lamosiny na tsia. Ny Frantsa nanolo-tena an'i Steve Bould, mpiandraikitra mpanampy dia nanokana iray isaky ny sehatra miaraka amin'ny tanora mba hanampy amin'ny fanamorana ny fiovam-pony amin'ny fiarovana. Tsy maintsy nampianatra azy ny fomba hiarovan-tena amin'ny basy i Bould.
Androany, Bellerín dia mijanona ho iray amin'ireo tanora mpiaro tsara indrindra tsy vitan'ny Premier League fa baolina eran-tany.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -A Bachelor degree student
Tao amin'ny 2016, niditra hopitaly tao amin'ny Oniversiten'i Pennsylvanie i Hector, sekoly ambaratonga ligy any Philadelphia.
Bellerin dia manohy diplaoma amin'ny sehatry ny varotra, ary mandinika ny resadresaka ety anaty aterineto ary manatanteraka ny fanadinana amin'ny tranokalan'ny sekoly ihany koa.
Niaiky ilay tanora vao haingana fa hitany fa tena sarotra ilay fianarana, nefa io no tena tiany indrindra.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tattoo facts
Fantatr'i Hector Bellerin ny fihazakazahany haingana ny andalana saingy nalaza ihany koa izy tamin'ny zavakanto.
Ny haingam-pandeha Espaniola dia manana rantsantanana lava midina ny sandriny havanana izay ahitana ny sarin'i Maria Virjiny miady amin'ny halavan'ny loha-tarehiny.
Hoy i Hector indray mandeha: "Nahazo ahy voalohany aho, ny rosary, ny renibeko dia matetika nividy azy ireo ho ahy, saingy mazava ho azy fa tsy afaka milalao miaraka amin'izy ireo aho satria tsy afaka manao firavaka. "Nanapa-kevitra àry aho fa hanao tatoazy. Mihevitra aho fa manodidina ny 15 na 16 aho rehefa nanao izany, ary izany indrindra no voalohany.
Hector koa dia manana tatoazy amin'ny voromailala sy ny famantarana ny fianakaviana. The giant 'Family' dia ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, ny renibeny, ny anabaviny, ny mamanay ary ny dadabe sy ny anadahy ary ny sisa amin'ny Bellerin. Ho an'i Hector, ny zavatra rehetra dia mikasika ny fianakaviako.
Hector Bellerin Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Héctor Bellerín Moruno dia avy amin'ny fianakaviana iray avy amin'ny fianakaviana Catalan Catalan. Ny ray aman-dreniny, fantatra fotsiny amin'ny hoe Maty Moruno dia Catalans. Nanolotra ny zanany ho an'ny FC Barcelone izy ireo tamin'ny vanim-potoanan'ny 6. Efa nanomboka ny fampiasam-bola amin'ny baolina kitra.
Nividy trano vaovao tany Londres i Bellerin taloha, izay antenain'ny ray aman-dreniny hipetraka. Nipetraka tany Londres akaikin'i Hector izy ireo. Vao haingana, nividy trano hafa tao Barcelona izy. Nitranga izany teo anelanelan'ny fipoahana tao Arsenal.
Hector Bellerin dia nanamafy ny Fisian'ny Pisces ary manana ny toetrany manaraka ny toetrany;
Ny tanjon'i Hector Bellerin: Ny fangorahana, ny artista, ny saina, ny hendry, ny hendry, ary ny mozika. Ny fahalemen'i Hector Bellerin: Matahotra, matoky tena, malahelo, maniry ny handositra ny zava-misy, mety ho lasibatra na maritiora. Inona no tian'i Hector Bellerin: Ny maha-irery, ny torimaso, ny mozika, ny tantaram-pitiavana, ny haino aman-jery an-tsary, ny milomano ary ny ara-panahy Inona no tsy tiany nataon'i Hector Bellerin: Fantaro-ny rehetra, voatsikera, ny lasa lasa miverina amin'ny fisavoritahana sy ny halozàna rehetra.
Ny biby tiany indrindra an'i Hector Bellerin: Nilaza izy fa ny biby tiany indrindra no tigra satria tiany ny azy "Ny hanoanana". Amin'ny heviny, midika izany fa ny Espaniola dia manana ny filana ilaina ho an'ny fahombiazana.
Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pahaterahan'i Hector Bellerin momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!